Fitaovana fiarovana amin'ny rano efitra mafana | Sina mpanamboatra, fitaterana solika any amin'ny efitra fisoloana rano any Shina
Vera fiarovana amin'ny efitrano fandroana
Fampahalalana fototra Fampahaleman'ny vera mafana: Mifehy mora foana ny fiainana manokana manomboka izao, ny hany ilana azy dia ny fandanjalanjan'ny kofehy iray mba hahafa-po ny varavaranao mando. Ny teknolojia fitaratra hendry dia nampidirina tao amin'ny vokatrao hanampiana anao hanova ny endrik'izy ireo amin'ny tinady. Na te te hanafina maso ianao na manao jiro bebe kokoa dia mila manindry an'io bokotra io ianao. Miaraka amin'ny fitaratra azonay ho an'ny rindrina mandro sy varavarana, miaro hatrany ny fiainanao! Mitady fitaratra comp ...
Jiro malefaka na ambany vy ho an'ny efitra mafana
Fampahalalana fototra no andao hojerentsika, varavarana fandroana dia tsy varavarana fandroana fotsiny, fa safidy manjelanjelatra izay mametraka ny feo sy ny fihetseham-pon'ny efitra fandroana iray manontolo. Izany no singa tokana lehibe indrindra ao amin'ny efitrano fandroana sy ilay entana izay manintona indrindra ny sainy. Tsy izany ihany, fa tsy maintsy miasa tsara koa. (Hiresaka momba izany ao anatin'ny iray minitra isika.) Eto eto Yongyu Glass dia fantatsika hoe inona no fiantraikan'ny fandroana na fantsom-baravarana. Fantatsika ihany koa fa ny fisafidianana ny fomba mety, ny endrika, ary ny ...
Taratasy vita matevina / vera voakaly ho an'ny efitrano fandroana
Fampahalalana fototra an-tsoratra vita amin'ny vera vita pirinty Na misafidy fitaratra miloko ho an'ny varavarankely, talantalana, na takela-by. Mamatotra ity fitaratra ity ary mety tsy ho tratry ny fiantraikany. Ny fitaratra dia miseho mitovy amin'ny lovia nentim-paharazana, mahatonga azy ho tsara safidy ho an'ireo izay maniry filaminana kely nefa tsy hanova ny fisehoana tontonana amin'ny fanodinana. Topazo maso ny karazam-pifidianana marefo sy loko loko Yongyu Glass hanombohana ny fahazoana ny p ...